Prof. Ibraahim Maygaag Samatar Oo Kooxaha Soomaaliya Ugu Baaqay Aqoonsiga Somaliland | Somaliland.Org
January 27, 2011	“Somaliland Waxay Sii Noolaan Kartaa Aqoonsi La’aan oo ay Horumarin Kartaa dhaqaaleheedda”
Hargeysa (Somaliland.Org)-Prof. Ibraahim Maygaag Samatar, oo ka mid ah siyaasiyiinta iyo aqoon yahanada waaweyn ee Somaliland, isla markaana wax ka dhiga jaamacad ku taalla dalka Jabaan, ayaa ugu baaqay kooxaha ku hirdamaya dalka qalalaasuhu ka taagan yahay ee Soomaaliya inay aqoonsadaan madaxbanaanida Somaliland.
Prof. Ibraahim waxa kale oo uu sheegay in Somaliland ay sii jiri karto aqoonsi la’aan oo ay horumarin karto qaranimadeeda.
“Labaatankii sanadood ee ay burburtay wixii la isku odhan jiray Soomaaliya ee Siyaad Barre ka dib, faa’iidadu waxay ka jirtaa oo qudha Dhinaca Somaliland. Somaliland uun baa degtay, nabad samaysay dhaqaalaheeddii dhistay isla markaana Magaalooyinkoodii burburay dib u hagaajisay. Doorashooyin qabatay oo xoriyad samaysay iyadoo aanay cidina caawin. Dhinaca Soomaaliya waxba lagama faa’iidin oo waad arkaysaa waxa ka dhacaya ee way ka sii dartay Soomaaliya (Koonfurtu). Waxaad ka soo qaadaa uun xaalka Soomaaliya waxa caalamku ugu yeedhaan qaran fashilmay, ”ayuu yidhi Prof Ibraahim Maygaag Samatar oo shalay u waramayay laanta Afsoomaaliga ee Idaacada BBC-da oo falanqeynaysay sanad guurada 20-aad ee ka soo wareegtay burburkii wixii la isku odhan jiray Soomaaliya.
Prof. Ibraahim Maygaag Samatar, wuxuu ugu baaqay shacbiga dalka qalalaasuhu ka jiro ee Soomaaliya inay aqbalaan qaranimada Somaliland isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Waxaan leeyahay dadka Soomaaliya waa Koofurtii hore’e xaqa ay Somaliland u leedahay inay dawladeedii soo ceshato. Markaa iyagu waa dad Soomaaliyeede’e ay saaxiibaan. Somaliland-na markaa wax bay ka qaban kartaa arrimaha Soomaaliya intii tamarteeda ah. Imika xaalada Soomaaliya way sii adkaatay oo waa tan ay soo galeen afka ku balaadhin maynee waxaynu ognahay. Markaa waxa loo baahan yahay in Soomaaliya laga sameeyo nabadeyn, sida kaliya ee Somaliland wax ugu qaban kartaana waxa weeyaan in kooxaha Soomaaliya ay ogolaadaan dawladnimadeeda.”
“Anigu waxaan ahay nin toban sanadood ku soo dhex jiray halgankii SNM, shardiga kaliya ee Somaliland wax ula qaban kartaa Soomaaliya waa inay Soomaalida kale ogolaataa in Somaliland Gobanimadeedii la soo noqotay, markaana yidhaahdaan walaalayaal wax nala qabta,”ayuu yidhi Prof. Ibraahim Maygaag Samatar.
Prof. Ibraahim oo la weydiiyay inay suurto gal tahay in Somaliland iyo Somalia u kala baxaan sida Itoobiya iyo Ereteriya iyo Sida Suudaan ka dhacday dhawaan waxaanu yidhi “Waxaanay suurto gal uga ahayn Itoobiya waxa dhinac wax ka jirtay xarako dhisan oo guulaysatay geesta kalena waxa ka jiray dawlad dhisan labadaas ayaa wada hadlay. Somaliland yay la hadashaa xiligan Ma Al-Shabaab, ma Xasan Daahir Aways, Mise shariif ayay la hadashaa.”
Mar wax laga weydiiyay haddii aanay jirin cid Soomaaliya meteli karta oo la lala hadlaa, wa ayo cida ay Somaliland aqoonsiga ka raadinaysaa ? waxaanu arrintaasi kaga jawaabay “Somaliland way iska noolaan Kartaa Aqoonsi la’aan oo dawladnimadeeda ayay iska haysanaysaa, dhaqaalaheeda awalba wuu dhisnaaye waanu iska dhisan karnaa. Adduunkuna wuu noo iman karaa. Yeelkadeeddee Ictiraafka. Wadankayaga nabad ayaanu la doonaynaaye’e ninkii dagaalamayaa ha iska dagaalamo.”
Prof. Ibraahim Maygaag Samatar, oo ka jawaabayay su’aal ahayd waxa Ictiraafku kala maqan yahay Somaliland wuxuu yidhi “Laba sadex arrimood, waa midi dawladaha waaweyni waxay leeyihiin horta Afrika ha idin ogolaato. Afrikuna waxay leeyihiin xuduudkii isticmaarka la bedeli mayo.Somaliland-na waxay leedahay anagaaba xuduudkii Isticmaarka ku taagan oo waafaqsan.imika Xamar dhisan oo lagala hadlo arrimahaasi ma jirto kooxaha ka jiraana in mid waliba mowqifkeeda gooni u sheegto mooyee wax kale ma jirto. Anaguna waanu iska noolaan doonaa oo adduunkuna inta uu iska daallo ayuu iska kaaya ogolaan doono marka arrintan Suudaan dhamaato. Midowga Afrika waa kuwii wefti u soo diray Somaliland shan sano ka hor waxay yidhaahdeen Somaliland xaq ayay u leeyihiin qaranimadooda. Laakiin dawladihii ayaa waabanaya.
Haddii imika ay Koonfurta Suudaan ogolaadaan, ma jirto Sabab Somaliland loo diido. Markaa haddii ay Somaliland dawlad noqoto firaaqo ayaanu u yeelanaynaa aanu ku dhex galo kooxaha Soomaaliya isku haya.”
Previous PostThe Uprising in Tunis (Al-intifada): Time of change in the Arab worldNext PostXisbiga UCID Oo Jawaab Kulul Ka Bixiyay Hadalo Ka Soo Yeedhay Masuuliyiin Ka Tirsan Xukuumada	Blog